Ilay siny vaky - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Ny siny vaky
Taloha dia nisy mpitatitra rano tany India. Tehina hazo mavesatra no nipetraka teo an-tsorony, izay nisy siny rano lehibe niraikitra tamin'ny ankavia sy havanana. Ankehitriny ny iray amin'ireo siny dia nisy triatra. Ilay iray hafa kosa dia noforonina tanteraka ary niaraka tamin'io ilay mpitatitra rano dia nahavita nanatitra rano feno tamin'ny faran'ny dia an-tongotra lavitra avy tao amin'ny renirano nankany amin'ny tranon'ny tompony. Tao anatin'ilay siny vaky anefa dia tsy nisy afa-tsy antsasaky ny rano sisa tavela rehefa tonga tao an-trano. Nandritra ny roa taona dia nitondra tavoara feno feno sy tapany feno ny tompony. Ny tonga lafatra amin'ireo siny roa dia mazava ho azy fa nirehareha tokoa fa ny mpitatitra rano dia afaka mitondra rano feno ao anatiny foana. Ilay siny misy ilay triatra kosa dia menatra fa ny antsasany dia tsara noho ilay tavoara hafa noho ny lesoka. Taorian'ny henatra roa taona dia tsy zakan'ny siny vaky intsony ary hoy izy tamin'ilay nitondra azy: "Tena menatra ny tenako aho ary te hiala tsiny aminao." Nijery ilay siny ilay mpitatitra rano ary nanontany hoe: “Fa inona no hatao? Inona no mahamenatra anao? " 'Tsy vitako ny nitazona ny rano nandritra ny fotoana rehetra, ka ny antsasaky ny rano ho entinao ho ao an-tranon'ny tomponao ihany no alefa amiko. Tsy maintsy miasa mafy ianao fa tsy mahazo ny karama feno satria iray na sasany sy sasany fotsiny no entinao fa tsy siny roa rano. " hoy ny siny. Nangoraka ilay mpitondra rano ilay siny taloha ary te hampionona azy. Ka hoy izy: "Rehefa mankany an-tranon'ny tompoko aho dia tadiavo ny voninkazo mahafinaritra eny amoron-dalana." Afaka nitsiky kely ilay siny ary dia niainga izy ireo. Tamin'ny faran'ny làlana, na izany aza, nahatsapa ho fadiranovana indray ny siny ary dia nanenina indray izy tamin'ilay mpitatitra rano.
Fa hoy ny navaliny: “Hitanao ve ireo voninkazodia eny amoron-dalana? Voamarikao ve fa eo amoron-dalana fotsiny izy ireo no maniry, fa tsy ilay iray itondrako ny tavoara hafa? Fantatro ny fitsangatsangananao hatramin'ny voalohany. Ary noho izany nanangona voa voninkazo vitsivitsy aho ary nanaparitaka azy teo amin'ny sisin'ny làlana. Isaky ny mihazakazaka mankao an-tranon'ny tompoko aho, dia nampisotroinao izy. Afaka naka vitsivitsy tamin'ireo voninkazo mahafinaritra ireo isan'andro aho ary nampiasa azy ireo handravaka ny latabatry ny tompoko. Ianao no namorona an'io hatsaran-tarehy rehetra io. "
Tsy fantatra ny mpanoratra